ZMO Kamudzira kuparadzana okisijeni midziyo - China Hangzhou Poly Air Separation Equipment
ZAJ firita mbereko
ZNH hydrofining midziyo
ZBN Psa senitrogen nokuparira mudziyo
ZMO Kamudzira kuparadzana okisijeni michina
Kushanda musimboti. Compressed mhepo nomumhepo ekunatswa mudziyo kubvisa yakasimba netsvina akadai mafuta, huruva uye gaseous mvura zhinji, kupinda Kamudzira kuparadzana hurongwa, kuparadzana Kamudzira rudzi polyester mhango internet micro danda integratedcomponent. Under kumanikidzwa, mhando dzose gasi adsorption, mune mhango internet membranediffusion, kupinda yevanhu siyana, iri urongwa, tinoti gasi permeation ratefor "nokukurumidza gasi", akadai okisijeni, mvura nemhute permeation zvazvingava; S ...
Compressed mhepo nomumhepo ekunatswa mudziyo kubvisa yakasimba netsvina akadai mafuta, huruva uye gaseous mvura zhinji, kupinda Kamudzira kuparadzana hurongwa, kuparadzana Kamudzira rudzi polyester mhango internet micro danda integratedcomponent. Under kumanikidzwa, mhando dzose gasi adsorption, mune mhango internet membranediffusion, kupinda yevanhu siyana, iri urongwa, tinoti gasi permeation ratefor "nokukurumidza gasi", akadai okisijeni, mvura nemhute permeation zvazvingava; duku "zvishoma" ari gasi, zvakadai senitrogen. Mixed gasi kubudikidza Kamudzira, "nokukurumidza gasi" kunowedzerwa mu thelow-kufurirwa panze, "nokunonoka" gasi kunowedzerwa padunhu kumanikidzwa mukati, saka sezvo torealize kuparadzana okisijeni uye senitrogen. Pasi kudzorwa PLC munogona kuona chichiitwa akatsiga goho chigadzirwa oxygen.
1, zvichiitika nyore, chiine chimiro, chaizvo zvemari uye zvidikanwi zvakasiyana vanoshandisa senitrogen;
2, iyo Kamudzira chezvinonhuwira kuramba soro kumanikidzwa, pasi kumanikidzwa kurasikirwa, anogona kugutsa senitrogen kufurirwa uye yakakwirira vanoshandisa;
3, vharuvhu chinja uye dzimwe zvinokambaira zvikamu, kunofambira mberi kuvhiyiwa, pasi kukundikana zvazvingava, Nokuraramisa pokuwanda kwebasa vanokwanisa diki;
4, mudziyo une zvakanakira diki basa nzvimbo, uye zvinogona kushandiswa indoor uye Mobile oparesheni;
5, mureza Kamudzira module revatema design, nokuwedzera rokuti Kamudzira kuparadzana apedza nyore senitrogen kugadzirwa vanokwanisa kuwedzera;
6, yakakwirira mwero kushandisa michina, mudziyo rekurira; kusvika chigadzirwa gasconcentration mukati maminitsi 10;
7, pfungwa midziyo kushanda uye hapana ruzha, pasina kusvibiswa, akachena gasi chigadzirwa, pasi dova pfungwa.
Muna 8, iyo combustion vanotsigira mafomu, izvozvo ane nzvimbo nani zvikuru mumhepo kuparadzana muitiro, nechepazasi uchishandisa simba.
Uye okisijeni goho: 1 ~ 30000Nm3 / h, okisijeni wevasungwa 30%, membranemethod mubhizimisi, kuvariritira uye kushandiswa mari chete cryogenic uye (V) ne PSA70% kusvika 80%, uye chikero huru, kupfuura hupfumi Kamudzira nzira.
Uye okisijeni kuchena: 30% ~ 45% (mbiri giredhi kuparadzana okisijeni kuchena: 90%).
Previous: ZMN Kamudzira kuparadzana senitrogen zvibereko mudziyo
Next: VPSA Vacuum okisijeni urwu michina
Air Kwezvokudya Nemiti Kuparadzana Plant
Air Kuparadzana Equipment
Air Kuparadzana Plant
Air Kuparadzana Plant Mechanical Equipment
Centrifugal wokufema nesefa Separation Equipment
Cryogenic Equipment For Air Kuparadzana Plant
Psa Air Kuparadzana Plant
Solid-Liquid Kuparadzana Liquid Gas Separator
ZMN Kamudzira kuparadzana senitrogen zvibereko mudziyo
VPSA Vacuum nevezera famba adsorption Synowie ...
Technology rehydrogen kurimwa kubva kwandiri ...
Dry muitiro desulphurization michina
Psa decarbonization michina
Carbon monoxide yokuzvinatsa michina